Kooxda Real Madrid oo war layaab leh heleysa kaddib markii la shaaciyey inuu ka tagayo kabtankooda Sergio Ramos – Gool FM
(Madrid) 24 Maajo 2019. Sida uu baahiyey Barnaamijka El Chiringuito Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ka fiirsanaya inuu ka tago kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Warkan uu baahiyey Barnaamijka El Chiringuito ayaa layaab ku noqday Real Madrid iyagoo la sheegayo in kabtan Sergio Ramos uu su’aal gelinayo mustaqbalkiisa kooxda Los Blancos.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Ramos uu si rasmi ah uga fikirayo inuu mustaqbalkiisa & Haddii uu aqbalayo dalabyada badan ee uga imaanaya kooxaha ugu waa weyn kubadda cagta qaaradda Yurub.
In Ramos uu shaki geliyo mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid ayaa sababta ka dambeysa lagu sheegay inay tahay wadahadal uu difaacan la yeeshay madaxweynaha Los Blancos ee Florentino Perez kaddib markii ay ka hareen tartanka Champions League kulankii ay garoonkooda Santiago Bernabeu kula yeesheen kooxda Ajax.
Lama oga illaa iyo haatan go’aanka rasmiga ah ee uu qaadan doono Sergio Ramos, balse waxa ay dhabarjab wayn ku noqonaysaa kooxda Real Madrid haddii kabtankooda uu ka baxo albaabka Santiago Bernabeu.
Inkastoo aan illaa iyo hadda weli la shaacin kooxaha doonaya, haddana waxaa la aamisan yahay in kooxo magacyo waa weyn ku leh qaaradda Yurub ay saf u soo geli doonaan saxiixa Ramos haddii uu caddeeyo go’aankiisa ah inuu ka tagayo Real Madrid.